Ninkii askarta ka dilay CIA-da ee saaxiibbadiis ay sida khiyaanada ah ku geeyeen safaaradda Mareykanka | Dayniile.com
Home Warkii Ninkii askarta ka dilay CIA-da ee saaxiibbadiis ay sida khiyaanada ah ku...
Ninkii askarta ka dilay CIA-da ee saaxiibbadiis ay sida khiyaanada ah ku geeyeen safaaradda Mareykanka
Mar qura ayuu nin qori wata ka soo booday gawaarida gadaashooda waxa uuna billaabay in uu rasaas furo. Ilbiriqsiyo gudahood, labo xubnood oo ka tirsanaa CIA-da ayaa isla goobta ku dhintay saddex kalena way dhaawacmeen. Dhacdadaas waxay ku aaddaneyd 28 sano ka hor, 25-kii bishii January ee sanadkii 1993-kii.
Previous articleIsbaheysiga Yeman oo sheegay in ku dhawad 200 oo ka mid ah Xuutiyiinta lagu dilay weerarro ka dhacay dalkaas.
Next articleMuwaadin Soomaaliyeed Oo Lagu Dilay Dalka Koofur Afrika
Faah faahin laga helayo Haweeneey lagu dilay Muqdisho
I will be your digital social media manager and marketing expert